न गाँसको टुङ्गो न वासको |
प्रकाशित मिति :2015-06-04 10:32:40
दोलखा, भीमेश्वर नगरपालिका– १ की ८१ वर्षीया जानुका पाण्डे अब एक्लै भएकी छिन् । उनको न गाँसको टुङ्गो छ न वासको । दुई वर्षअघि श्रीमान अमृतबहादुर पाण्डेको मृत्यु भएपछि उनी भीमेश्वरस्थित गौतम टोलमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन् । त्यही घर पनि वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले आधा लडायो भने १३ गते आएको भूकम्पले पूरै ढाल्यो । श्रीमानले छोडेर गएको घर भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । उनी न त्यो भग्नावशेष हटाउन सक्छिन् न त कामदार खोजेर काम लगाउन ।
त्यसैले भएका भाँडा र लत्ताकपडा पनि भग्नावशेषमा नै पुरिएका छन् । जीउमा लगाएको कपडाबाहेक अब उनीसँग केही पनि बाँकी छैन ।
लौरो टेकेर भग्नावशेष भएको घरको छेउमै बसेर टोलाइरहेकी जानुका भन्छिन्, ‘खै अब भगवानले नै केही गर्लान् कि ? मेरा त हातगोडा पनि चल्दैनन् ।’
भूकम्प आउँदा उनी घरकै बार्दलीमा आराम गर्दै बसेकी थिइन् । ‘भुइँचालो आउन थालेपछि भागेकी धन्न बाँचेँ,’ उनी भन्छिन् । अहिले उनी छिमेकीको शरणमा पुगेकी छिन् ।
दोलखामा सरकार र करिब तीन दर्जन सङघसंस्थाले राहत वितरण गरिरहेका छन् । तर, जानुकाका भागमा अहिलेसम्म १५ किलो चामल मात्र परेको छ । सुत्नका लागि कहिले कसकोमा त कहिले कसकोमा गएर रात कटाउँछिन् । पानी आउँदा छिमेकीले नै ओत दिएका छन् ।
पाल त घर भत्किएका सबैलाई दिएको छ नि ? पाउनुभएन ? उनी भन्छिन्, ‘खै के गर्नु ? पाए पनि कसले बनाइदिन्छ र मलाई वास । म एक्लै बनाउन सक्दिनँ । तर, अहिलेसम्म कसैले पनि दिएका छैनन् ।’ उनलाई राहत कहाँ र कसरी पाइन्छ भन्नेसम्म पनि थाहा छैन । १५ किलो चामल पनि छिमेकीले भनेपछि पाएकी हुन् ।
काठमाडौंमा बस्दै आएकी इन्द्रकुमारी पाण्डे घर भत्किएको थाहा पाएपछि दोलखा फर्किएकी छिन् । तीन छोराकी आमा इन्द्रकुमारी भन्छिन्, ‘छोराहरू फर्किएर आउँदैनन् । पुख्र्यौली थलो आफूलाई माया त लाग्छ नि ।’ ८२ वर्षीया इन्द्रकुमारी अब भग्नावशेष हटाएर टहरो बनाउने तयारीमा लागेकी छिन् ।
दोलखा भीमेश्वर– २ की तारादेवी थामीको अब घरमा भग्नावशेषबाहेक केही बाँकी छैन । ‘अर्काको कमाएर जम्मा पारेको अन्न पनि माटोमा नै मिल्यो । अब बाँकी केही छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘दुःख कसलाई सुनाउनु ।’
सरकारले दिने राहतको चामल र त्रिपालमा रात कटाउँदै आएकी उनी वर्षा लागेकाले थप चिन्तित बनेकी छिन् । ‘छोराछोरी साना छन्, काम गर्न नगए खान पुग्दैन, छोराछोरी छोडेर हिँड्ने ठाउँ नै छैन,’ उनी भन्छिन् ।
सरकारले दिने राहत त केही दिनका लागि मात्र हो जस्तो लाग्छ उनलाई । ‘वर्षा लाग्यो, आफ्नो काम त गर्नैपर्छ नि । अरूको मात्र मुख ताकेर पनि कतिन्जेल पुग्छ र ?’ उनी भन्छिन् । तर, अब कसरी मिलाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ उनलाई ।
दोलखा सुन्द्रावती– ९ की मुनु थामीका श्रीमानले वैदेशिक रोजगारीबाट ल्याएको पैसाले यही वर्ष तीनतले घर बनाएका थिए । मुनु भन्छिन्, ‘आफ्नोमा काठपात केही छैन, सबै किनेर बनाएको, त्यसैले साढे दुई लाख लाग्यो । कमाएको बाँकी पनि छैन, घर पनि छैन । अब कसरी गुजारा गर्नु र ?’ दुई वर्षअघि मात्र विवाह गरेकी १९ वर्षीया मुनुले घर बनाएपछि श्रीमान–श्रीमती सँगै बस्ने सपना पालेकी थिइन् । भन्छिन्, ‘कमाउने ठाउँ पनि छैन, अब सँगै बसेर कसरी चल्छ होला र ?’
सुस्पा क्षमावती– ६ की ४५ वर्षीया कमला भुजेल घरमा पुरिएको सामान निकाल्दै थिइन् । एउटा घर पूरै लडेको कमलाको अर्को घरको एकापट्टि ढलेको छ । कमला भन्छिन्, ‘माटोले पुरिएका सामान केही निकालियो, धेरै माटोमा मिलेछन् ।’
‘अन्नपात टिप्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ,’ उनी भन्छिन् । उनी पनि राहतमा पाएको त्रिपालले वर्षा नधान्ला भन्नेमा चिन्तित छिन् । ‘अब तत्काल घर बनाउन सके त हो, नत्र निक्कै गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।
जिल्ला विकास समिति दोलखाले दिएको जानकारीअनुसार दुई लाख ८८ हजार जनसङ्ख्या भएको दोलखामा करिब आधा महिलाको सङ्ख्या छ । दोलखामा ५७ हजार घरधुरीमध्ये ५६ हजार पाँच सय घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् ।